Srk Iyo Akshay Dartood Filimka Shraddha Kapoor Ee Haseena Parkar Oo Mar Kale Dib Loo Dhigay | Filimside –
Srk Iyo Akshay Dartood Filimka Shraddha Kapoor Ee Haseena Parkar Oo Mar Kale Dib Loo Dhigay
Aug 1, 2017 - 2 Jawaabood
Taariikh: August 1, 2017:
Shraddha Kapoor filimkeeda xiga ee Haseena Parkar wuxuu qorsha ahaa in la daawado 18 August ee bishaan laakiin director Apoorva Lakhia iyo kooxda filimka Haseena Parker ayaa mar kale go’aansaday in ay dib u dhigaan filimkooda.
Filimka Haseena Parker oo looga hadlaayo Haseena gabadhii la dhalatay Gangstar-ka weynaa ee Mumbai laga danbeyn jiray Dawood Ibrahim, kooxda filimkaan ayaa go’aan saday in markii afaraad dib u dhigaan filimkooda.
Marka ugu danbeysay qorshah wuxuu ahaa August 18 ee bishaan laakiin mar labaad waanka xunahay kooxda filimkaan ayaa dib u dhigay filimkooda ayagoo fiirinaaya danta filimkooda.
Director Apoorva Lakhia ayaana sheegay in filimkiisa dhib uusan gelin karin maadaama labada todabaad ee socoto tiyaatarada la saari doono filimada Shah Rukh Khan Jab Harry Met Sejal Iyo Akshay Kumar, Toilet Ek Prem Katha Sidaa daraadeed waxaana go’aan ku gaarnay in filimkeena Haseena Parkar dib u dhigano.
Waxaa Aqriyay: 1,308
Kaligood Dan uguma jirto ee dhaman filimada Bollywood ee tiyatarada is ku ciririnaya ayey dan ugu jirtaa
ibraahin cabdilaahi baafaawi says:
runtah weeyeh mariya xasan